I-Ultimate Guide ku-Methyltestosterone ye-Bodybuilding
Mashi 13, 2019
Ingabe uzingela i-steroid enamandla enqobile ukwethenjwa kwabadokotela? Yebo, i-methyltestosterone kufanele kube yisinqumo sakho esilandelayo. Thola izinzuzo zokusebenzisa le mithi, umlando wayo ekubuseni komzimba kanye nensizakalo yezokwelapha, imiphumela emibi, nokuthi ungathenga kanjani umthamo.
Ukwakhiwa komzimba akukona ngokubhalisela endaweni yokuzivocavoca yangakini nokwenza umsebenzi osebenza ngokujulile. Udinga ukwenza okuningi kunokusebenza ngaphandle. Phela, ungase ulahlekelwe yi-psyche kanye nesisusa endleleni, ikakhulukazi uma imiphumela ingabonakali.
Wonke umakhi womzimba ubheke phambili emzimbeni we-ribbed ngemisipha evulekile kahle. Uma uya emncintiswaneni, ukuhlukunyezwa, amandla, namandla akho kuzobalelwa. Ngomqondo wangempela, lezi zizwe ziyisisekelo sempumelelo yakho kuphela. I-Trenbolone Enanthate ne-Trenbolone Acetate (Yimuphi I-Wines?)
Ingabe wawa ngobuso kulesi senzo? Bamba ngoba kukhona okuningi okusilondolozile. Nakuba sinemigomo ehlukile, sonke sifuna ukuthi amandla omlingo ukulwa nomphikisi wethu. Kulesi simo, akusizi neze ukuzama ukusebenzisa i-steroid efana ne-methyltestosterone. Ukuze kuzuze ukuhlukunyezwa komsebenzisi, lesi sidakamizwa sidlula bonke abadlali bawo.
Ngaphambi kokuthatha i-methyltestosterone, qiniseka ukuthi uyaqonda lesi sihloko.
1.Iyini i-Methyltestosterone? Isebenza kanjani?
I-Methyltestosterone iphakathi kwama-anabolic steroids esikoleni esidala esakhiwa esikoleni esidala sokwakha umzimba. Liyinkimbinkimbi yamakhemikhali okuthi i-CAS ayikho 58-18-4. Umkhiqizo uwuyisidakamizwa esijwayelekile sabasebenzi bomzimba njengoba ubonisa izici ze-androgenic ne-anabolic.
I-Methyltestosterone yindlela yokuhlolwa ngomlomo yephayona, etholakala ku-testosterone. Okwenza ukuthi i-compound iyingqayizivele ukufaka i-alkylated C17-alpha molecule. Ngokwesayensi, ukwengezwa kweqembu le-methyl kuqinisekisa ukuthi lesi sidakamizwa singaphila ngokusebenzisa ukuchithwa kwemishini nokugaya izinqubo emzimbeni.
E-Methyltestosterone iqembu le-methyl lifakazela i-17th isikhundla se-athomu ye-carbon. Lesi sici senza ukuthi i-compound iwele ekilasini le-C-17 i-alpha-alkylated steroids. Nokho, ngenxa I-Methyltestosterone yomzimba, izakhiwo ze-anabolic azibonakali njengezinye izinhlanganisela ze-C-17-aa.
Izilinganiso ze-androgenic ne-anabolic yomkhiqizo cishe zi-100 kwesigaba ngasinye. Le 1: Ukulinganisa kwe-1 kufana neyo-testosterone.
Nakuba le testosterone yasekuqaleni ishiya noma yimuphi umakhi womzimba onemisipha emihle kakhulu nokusebenza okuhle kakhulu, ukusetshenziswa kwayo kuyinto yonke. Ngokwesibonelo, i-pharma grade I-Methyltestosterone inama-pluses ezokwelapha ekwelapheni komdlavuza wesifuba, ukwelashwa kwe-menopausal, nokuphathwa kwe-osteoporosis.
Ukuba khona kweMethyltestosterone kubuyela ku-1935. I-steroid yaphula umhlabathi omusha wokusetshenziswa kwe-oral androgens hhayi kuphela kwizicelo zemitholampilo kodwa nasesidlangalaleni sokwakha umzimba. Isizathu esiyinhloko sokuthuthukiswa kwezidakamizwa kwakuwukufaka esikhundleni se-testosterone yemvelo emadodeni lapho amazinga okugcina ephansi kunejwayelekile.
Nakuba I-Methyltestosterone edayiswayo yayitholakale njengesidakamizwa somlomo ongasetshenzisiwe, i-Ciba Pharmaceuticals yafika ngamaphilisi e-buccal ayengaqedwa ngokuqondile ngolimi. Lezi zidakamizwa ziyizo zonke ukufutheka phakathi kwama-1950 no-1990 ngegama lomkhiqizo, i-Metandren Linguets.
Esikhundleni sokugwinya iphilisi ye-Methyltestosterone, ungabeka amathebulethi aseMetandren Linguets ngaphansi kolwimi bese uvumela ukuba bachithe. Ngemuva kokumuncwa, i-steroid ijikeleza ngezingqimba ze-mucosal ngaphandle kokudlulisa isibindi.
Njenganoma iyiphi enye i-anabolic steroid, ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kuye kwaqhubeka kungqubuzana. Kunokuthi kunomlando ohlanzekile, amazwe amaningi avinjelwe futhi ahlungwa Umhlinzeki we-Methyltestosterone ngaphandle kwezimakethe zemithi. Thatha, isibonelo, ngasekupheleni kwe-80; I-Endocrine Society yaseJalimane yavimbela ukudayiswa kweMethyltestosterone kusuka kuma Pharmacy aseJalimane.
Ngokulandelayo, amazwe amaningi aseYurophu ayilandela futhi avimbela ngenxa yemiphumela emibi ye-Methyltestosterone njenge-hepatotoxicity. Emazweni ase-US, izidakamizwa zivumelekile kokubili izinhloso zomtholampilo kanye nezidakamizwa. Kodwa-ke, kunzima ukukuthola njengendlela yokwakhiwa kwe-stand-alone kusukela umkhiqizi we-methyltestosterone eyohlale ehlanganisa nezinye izithako.
E-US, lesi sidakamizwa singokomthetho kuphela ngaphansi komthetho ovumelekile. Izinhlangano ezinkulu zezemidlalo ezihlanganisa namaKomidi e-Olimpiki aMazwe ngamazwe ziye zaphula umthetho ukusetshenziswa kwe-methyltestosterone ezemidlalo. Kuyinto yeHlelo III no-IV e-United States naseCanada, ngokulandelana.
Indlela i-Methyltestosterone esebenza ngayo
Ukuba i-steroid ye-alpha alkylated, i-Methyltestosterone ibophezela kumamukeli we-androgen (AR). Isebenza njenge-substrate ye-5α-reductase enzyme, ngakho-ke, ukuguqula ibe yi-17α-methyl-dihydrotestosterone (i-mestanolone). Ngemuva kokubophezela kuma-AR cells, i-steroid iqalisa ukubhalwa kwezakhi zofuzo ze-androgen, eziphethwe ukukhula okukhulu nezici zesondo zobulili.
Ngokungafani nezinye izidakamizwa ze-testosterone, ukuhlolwa kwe-methyl kunesilinganiso esiphansi somsebenzi we-anabolic. Ngakho-ke, i-anabolic ku-androgenic isilinganiso isincane kakhulu, okwenza i-steroid ibe nezindawo eziphakeme kakhulu ze-androgenic.
I-downside ebaluleke kakhulu ye-methyltestosterone bodybuilding steroid yukuthi iyancipha ngesikhathi sezenzo emzimbeni. Ukunambitheka kwe-17α-methyl estradiol kudala i-estrogenicity kanye nemiphumela emibi ye-estrogenic elandelayo njenge-water storage kanye ne-gynecomastia.
I-Methyltestosterone Structural Formula
Igama Product I-Methyltestosterone
Igama lamakhemikhali · 17A-methylandrost-4-en-17β-ol-3-eyodwa
I-CAS cha. 58-18-4
Iphuzu lokuxuba (° C) 161 - 166
Isilinganiso sokubilisa esilinganisiwe (° C) 383
lokushisa Isitoreji Gcina ekamelweni lokushisa (2 ° C - 20 ° C), kude nokushisa, umswakama, noma ukukhanya
ukubukeka Iphunga elimnandi elingenamnandi elimhlophe elikristallini
isisindo Yamamolekhula I-302.46 g / mol
ifomula Yamamolekhula C20H30O2
solubility · Ukunwebeka kwamanzi kuyi-34 g / mol ku-25 ° C
· Methyl utshwala
· Kancane kancane kutholakale amafutha emifino
Isigaba sezidakamizwa I-anabolic-androgenic steroid
Ukusetshenziswa Ukuqinisa umzimba nokukhulisa amazinga wamandla
Ukulinganiswa kokulinganisa 115 - 150
Isilinganiso se-Androgenic 95 - 130
Amagama Ezohwebo Ezivamile · Metandren
2. I-Methyltestosterone Isilinganiso
Imizila ye-Methyltestosterone Administration
Kunezinhlobo ezintathu zokuphatha i-methyltestosterone. Njengoba itholakala kwifomu yethebhulethi, indlela evamile yomsindo. Ungayigwinya iphilisi noma uyibeke ngaphansi kolimi noma phakathi komhlathi kanye namazinyo ekuphathweni okubhaliwe nokubhaliwe, ngokulandelana. Kulesi simo, izidakamizwa zizoqothula ngokuqondile ngaphandle kokuhamba ngamathambo emathunjini.
Thatha i-steroid kanye ngosuku ngamasonto amathathu ngezikhathi ezilinganayo zesikhathi. Okufanelekile, qinisekisa ukuyilawula ngesisu esingenalutho ukwandisa ukutholakala kwezinto eziphilayo. Ukuthatha ukuhlolwa kwe-methyl ngokudla kuzokwenza ukuthi ichithe ngamafutha angenayo i-undigested, ngakho-ke, ukunciphisa ukumunca kwayo egazini.
The Imithi ye-Methyltestosterone ikhuluma ngezici eziningana. Isibonelo, amadoda azohlala enenani eliphakeme kunazo zonke ebangeni lokulinganisa kunabesifazane. Futhi, umzila wokuphatha uzokhipha inani le-steroid isakhiwo somzimba esizothatha. Uma ukhetha amaphilisi e-buccal, umthamo uzoba ophansi ngenxa ye-potency ephezulu.
Ngenhloso yokuthuthukisa umzimba, thatha isilinganiso sezinsuku zonke phakathi kuka-10mg no-50 mg ngamasonto angu-8 amaningi. Kodwa-ke, iziguli ezibhekana nokuntuleka kwe-androgen zingasebenzisa lesi sidakamizwa uma nje imiphumela emibi ingaphansi. Konke Okudingeka Ukwazi Ngo-Anavar (Oxandrolone) ye-Bodybuilding
Uma umgomo wakho ukuthuthukisa ukusebenza, ke i-methyltestosterone ayikho. Ake ngichaze. Unemiphumela ephezulu ye-androgenic, engase ingavuli kahle nge-balance hormone yabesifazane. Ngakho-ke, akufanelekile ukufaka ingozi emiphumeleni emibi ye-virilization.
Kunconywa ukuthi abesifazane basebenzise i-steroid kuphela ngaphansi kwesigwebo sikadokotela. Ezimweni eziningi, amanani aphansi njengo-3mg azophatha izimpawu zokuya esikhathini. Nokho, nsuku zonke umthamo we-methyltestosterone kungakhuphukela ku-200mg uma uphatha ama-carcinomas angasebenzi.
Ngaphambi kokuba uthathe i-methyl test, qiniseka ukuthi ufunda ngelebula legunya. Lolu lwazi luzokunika indlela yokusebenzisa lesi sidakamizwa, izinyathelo zokuphepha zokuzithatha, nokuthi yini ongayilindela uma uthola umthamo.
Esinye isici esibucayi okufanele uqaphele ukuthi kufanele uqiniseke ukuthi uzophatha i-methyltestosterone ngezikhathi ezithile. Uma kwenzeka ungaphuthelwa umthamo wansuku zonke, thatha ngokushesha lapho umcabango uhlasela khona. Uma kwenzeka esikhathini esidlule, weqa oshiywe futhi uqhubeke nemithi yakho evamile.
Lesi sidakamizwa sivumelekile kokubili amadoda nabesifazane. Nokho, abesifazane kufanele basebenzise umthamo ophansi kakhulu ngangokunokwenzeka.
Ukusebenzisana kwezidakamizwa zeMethyltestosterone
Ukuhlolwa kweMethyl kuzokwazi ukusebenzisana nemithi eminingi, izithako zokudla, imithi yemithi, neminye imithi engavunyelwe. Lolu hlu lubandakanya imithi yokukhishwa yisifo sikashukela, i-blood thinners njenge-warfarin, ne-oxyphenbutazone.
Abesifazane abakhulelwe nabahlengikazi akufanele bathathe i-methyltestosterone. Ngisho noma ukhulelwa ngenkathi usebenzisa isidakamizwa, kufanele ucabangele ukuyeka umthamo. Izifundo ezenziwe kumazinyane ezikhulelwe ziqinisekisa ukuthi i-steroid ibangela ukukhubazeka kokubeletha, isisu semasculinization, nezinye izinto ezingafani neze-fetus.
Kubantwana kanye nentsha, ukusetshenziswa kwe-methyl test kungase kuphazamise ukuthuthukiswa kwamathambo.
Amanye amaqembu okufanele ahlukane ne-steroid yiziguli zomdlavuza, abantu abanezimo zenhliziyo, nalabo abanezifo zegazi. Nakuba unomlando wokuphatha nokwelapha umdlavuza webele, kuhle ukuba nomuthi kadokotela.
Yebo, uma ungumdlali osebenzayo, i-steroid ingaba yindlela kuphela yokuthuthukisa ukusebenza kwakho nokwandisa ukuqina kwakho. Nokho, kufanele uqaphele kusukela izinhlangano zezemidlalo zizokuzingela phansi. Ngokuqinisekile uzokwephula irekhodi lomhlaba, kodwa iziphathimandla zizonqamula imbali yakho futhi ikuvimbele ukuba ungene emidlalweni yezemidlalo.
3. I-Methyltestosterone Cycle
Umjikelezo ovamile we-methyltestosterone uhlala phakathi kwamasonto ayisithupha nesishiyagalombili. Isilinganiso somlomo esihle kakhulu i-40 - 50mg. Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi noma yiliphi inani elingezansi kwalolu hlu lingabe lunikeza imiphumela. Ngokuphambene nalokho, uzobona ukuthuthukiswa okumbalwa ngemiphumela emibi kakhulu.
Uma ngabe uzosebenzisa ifomu le-buccal, qiniseka ukuthi unciphisa umthamo kuze kufike ku-50%. Uzodinga ukusika ngomthamo ngoba le ndlela yokuphatha ine-bioavailability ephakeme uma kuqhathaniswa nefomu lomlomo.
Ekupheleni kwe i-methyltestosterone umjikelezo, ukukhiqizwa kokujwayelekile kwama-hormone e-testosterone kungenzeka kuphazamiseke. Kulesi simo, shintsha umshini we-post cycle ukuze ugcine amazinga abo.
4. Imiphumela ye-Methyltestosterone
Ngenxa yesikhashana sempilo, i-methyltestosterone izofinyelela phezulu futhi ifake igazi ngehora. Uma umqeqeshi osebenzayo ethatha i-steroid kungekudala ngaphambi komncintiswano, uzothola amandla amakhulu, ukuhlukumeza, namandla okuncintisana.
In the i-methyltestosterone bulking isigaba, izinguquko zihamba kancane futhi zibonakala kancane. Ngaphandle kokuba wenze okuthile okunamandla, ungase ungayitholi imisipha enomkhuba ophuphayo.
5. I-Methyltestosterone Half-Life
I-methyltestosterone isigamu-impilo ejwayelekile ku-2.5 kumahora we-3.5. Kuzo zonke, lokhu kungamahora angu-3.
Ngemuva kwesilinganiso sokugcina, i-methyltestosterone kanye nama-metabolite ayohlala emzimbeni isonto ngaphambi kokuqedwa ngokuphelele. Ngesikhathi sokuhlola, kuze kufike ku-90% kuyo kuyoba khona kumchamo ngenkathi bonke abanye bezovela emanzini.
Ngentuthuko ephezulu yobuchwepheshe, uzobe uthola amathrekhi we-steroid amane kuya kwamasonto ayisithupha emva kokuyeka. Kodwa-ke, lokhu kungenzeka ukuthi kunomsebenzi wokuthi umsebenzisi uthathe i-furosemide noma i-phenobarbital ukusheshisa ukuhlolwa kwe-methyl.
6. I-Methyltestosterone yokuCheka
Kulabo abasemjikelezweni wokusika, ukufaka i-methyltestosterone embusweni wakho nakanjani kuyoholela emiphumeleni emihle. I-steroid inemiphumela encane ye-anabolic. Ngakho-ke, inzuzo yesisindo ayinakhulunywa kakhulu futhi ngeke iqondwe.
Empeleni, inzuzo ebonakalayo isisindo njalo ngenxa yokugcinwa kwamanzi. Ngasekupheleni kwesigaba sokusika se-methyltestosterone, kuyoba namazinga aphezulu okuphuma kwamanzi njengoba umsebenzisi ebhalisa ukulahlekelwa okukhulu kwesisindo somzimba.
7. I-Methyltestosterone ye-Bulking
I-Methyltestosterone yokuthola isisindo I-se ngayinye ingase ingakunikeli ubuhlungu obunzima bomzimba obufunayo. Empeleni, noma ngabe yikuphi inani ozolizuza ngenxa yokugcinwa kwamanzi kagesi kanye nesisindo samanzi esilandelayo. Uma usuqedile lo mjikelezo, qiniseka ukuthi uhamba ngokusebenzisa ukwelashwa komjikelezo weposi ukuze ulondoloze lobukhulu bomzimba.
Ukuze uphephe, zama ukukhishwa kwe-steroid. Esigabeni sokukhukhumeza, faka izidakamizwa ezifana Dianabol, Decanoate, noma I-Trenbolone.
8. Izinzuzo zeMethyltestosterone
I-1) Yanda ku-Performance
I-steroid yenza ngokuvimbela umsebenzi wesintu futhi ikhuthaza i-anabolism. Lesi senzo sandisa ukusebenza, sithuthukisa amandla, futhi sikhuthaza i-psyche. Kwabalondolozi bomzimba, ama-powerlifters, nama-sportspersons asebenzayo, lezi zinzuzo ze-methyltestosterone zihlanganisa. Umsebenzisi uthola ukuqeqeshwa okunamandla ngamandla amaningi nesimo esiphezulu ngaphandle kokukhathala.
I-2) Ikhulisa ukuguqulwa
Ingabe ufuna ukuba ngumfana onzima endaweni? Yebo, i-methyltestosterone izokwenza. Noma yiliphi iqhaza lemidlalo yokulwa lizofuna ukuphambanisa ukuhlukumeza, amandla, nokugxila kulo mdlalo.
I-3) Ikhulisa iMiscle Mass
Nakuba ungatholi umzimba omkhulu, ungasabhange ebhidini ukuze uqale ukuqala i-methyltestosterone bulking umjikelezo. Kumele uqaphele ukuthi ukwanda kwesayizi womzimba kuhlale ngenxa yesisindo samanzi njengoba i-hormone ikhiqiza.
I-4) I-Steroid esheshayo yokwenza
Nge-methyltestosterone, uzozizwa umthelela wesidakamizwa, hhayi ngaphezu kwehora ngemva kokuwuthatha. Izinguquko zibonakala ngesikhathi sokugula ngenxa yesizathu esisodwa. I-steroid ine-half-life short. Ngakho-ke, lizofinyelela phezulu ekubaleni kwezintathu.
I-5) I-High Bioavailability
Ukuba khona kweqembu le-methyl ekwakhiweni kwe-methyltestosterone kwandisa ukutholakala kwayo ngokubaluleka okuphakathi kwamahora ayisithupha nesishiyagalombili. Uma nje ugcina izinga elihle lomuthi egazini, uzothola amandla amakhulu nokusebenza okuhle kakhulu.
Isidakamizwa sihlala isikhathi eside emzimbeni uma uyithatha ngendlela yokuphatha ibhakede kunokuba uma ugwinya ithebhulethi. Lesi sakhiwo senzeke ngoba singena ohlelweni lwezinambuzane ngokumunca ngaphandle kokudlula isibindi.
I-6) Ikhuthaza amazinga we-Testosterone
Uma ukukhiqizwa kwemvelo kwe-testosterone kuphansi, ngaso sonke isikhathi kululeka ukusebenzisa i-methyltestosterone. Lesi sidakamizwa sinenzuzo kubantu besilisa abane-hypogonadism yesibili nesisekelo njengokwehluleka kwe-testicular nokuntuleka kwe-gonadotropin-ukukhulula ama-hormone (GnRH). Ezinye izimo zibandakanya ukulimala kwe-pituitary hypothalamic, amacule angenasici, nokungabi khona kwe-androgens yemvelo engapheli.
Uma ucabanga ukuthi kuyindlela eluhlaza ye-hormone ye-testosterone, i-methyltestosterone izokwenza ngendlela efanayo futhi idale izici zesilisa eziyisibili zesondo.
I-7) I-Methyltestosterone Stacking
Ukuhlolwa kwe-Methyl akuyona into enamandla kakhulu, mhlawumbe ngenxa yesilinganiso esincane se-anabolic kwimisebenzi ye-androgenic. Nazi ezinye izindaba ezinhle, noma kunjalo. Uma ungayifaka nezinye i-steroids enamandla, amathuba ukuthi uzokhamuluka esibukweni.
Isibonelo, uma ujikeleza, inhlanganisela yama-methyltestosterone ne-Dianabol, i-Nandrolone, i-Trenbolone, noma i-Decanoate izokwenza. Ngakolunye uhlangothi, le steroid izogxila kahle nge-stanozolol lapho konke okufunayo kukwandisa ngamandla akho.
I-8) Ukwelashwa Kwebele Ngesifo Sebele
I-Methyltestosterone iye yabonakala iyasebenza ekulawuleni amakhemikhali asebele asevele asakaze kwamanye ama-tissue kwabesifazane. Njengoba lolu hlobo lwesisu luyi-hormone-sensitive, luzobuyisa. Amanye ama-carcinomas ancike ezintweni ezinjalo yi-endometrium, enye i-leukemia, i-lymphomas, nomdlavuza wesi-prostate.
Ngaphandle kwalokho, lo muthi uvimbela ubuhlungu besifuba se-postpartum. Umehluko Omkhulu Phakathi Kokuhlolwa Kwamanzi Nokuhlolwa Kwendlela Yokuhlola
I-9) Ukuphatha Izimpawu ZeMenopausal
Ukuqala kokumisa esikhathini kumiphumela emazingeni aphansi we-androgen kwabesifazane. Ukuncipha kwe-hormone kubangela ukukhubazeka ngokocansi, ukwehla kwe-libido, ukukhanya okushisayo, nezimpawu ezihlobene.
Ucwaningo lubonisa ukuthi ukuphatha izimo ze-postmenopausal nge-Methyl Test kuyasebenza. Ekukhuleni, abesifazane bangathatha izilinganiso eziphansi zomuthi ngaphandle kokubhekana nemiphumela emibi.
I-10) Ukwelapha Ukunciphisa Ukushona
Endabeni yokuphumula-ukuqala kokukhulelwa, i-methyltestosterone ingase ibe yodwa isinqumo esifanele sokukhuthaza izici zobunikazi zesibili. Lesi sinyathelo sisebenza uma isisulu singasabela kahle empilweni yokwelapha kwengqondo.
Odokotela bahlale bebeka umuthi isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha.
I-11) I-Original Male Testosterone Hormone
Nakuba i-synthetic ne-100% yokufakelwa, i-methyltestosterone iyimodeli ehlanzekile ye-androgen yesilisa. Isenzo salo sinyathelo sifana nalokho okwe-testosterone. Thatha, isibonelo; lo muthi uzobopha amangqamuzana amamukeli ngaphandle komzimba eqaphela ukuthi i-hormone ingaphandle. Ngokuphambene nalokho, i-methyl test izokwenza njengokungathi i-androgen engapheliyo.
9. Ukubuyekezwa kwe-Methyltestosterone
Ngaphezu kwe-90% yezibuyekezo ze-methyltestosterone zifakazela ukuthi i-steroid iyasebenza. Kwabalimi bomzimba, umuntu uzoqala ukuzwa ukwanda kokuhlukunyezwa namandla. Ngakolunye uhlangothi, iziguli ezine-hypogonadism namazinga aphansi e-testosterone zibike ukuthuthukiswa okukhulu.
U-100% wabo bonke abasebenzisi bavumile ukuthi i-methyltestosterone kulula ukuyisebenzisa futhi iqondise. Awekho amanani okuncintisana noma amajojo abuhlungu. Ngaphandle kwalokho, ukuthatha izidakamizwa kanye ngosuku kunabanye abaningi abavame ukukhohlwa imiyalelo yabo ngenxa yezibopho ezihlukahlukene.
Emva komjikelezo ophelele, ingxenye eyodwa kuphela yabasebenzisi be-methyltestosterone inelisekile. Noma ubani okhethile ukuyeka lesi sidakamizwa unezizathu ezimbili ezibucayi. Ngokwesibonelo, abantu babe nolwazi oluncane lokuphatha imiphumela emibi ngaphambi kokuba kwenzeke. Ngakho-ke, izimboni ezingezansi zikhulu kakhulu kunezinzuzo ze-methyltestosterone. Abanye ababili, abanye bacabanga ukuthi amanye ama-steroids asebenza kangcono kune-methyltestosterone.
Ukugula Imiphumela Emibi!
Ngokusekelwe ku ukubuyekezwa kwe-methyltestosterone, cishe wonke umsebenzisi uye wabhekana nokucindezeleka kwesidakamizwa. Imfihlo eqinisekile yokudlula imiphumela emibi ngokuthatha amanani aphansi, ukulondoloza ukusetshenziswa kwesikhashana, nokwenza imijikelezo emifushane. Ezinye zemiphumela emibi zihlanganisa;
Isikhumba se-oily nama-acne
Umjikelezo ongavamile wokuya esikhathini
Ukukhula ngokweqile kwezinwele
Imiphumela emibi ye-Methyltestosterone hamba uma usuyeka ukuwuthatha. Kodwa-ke, ukuziphatha kahle kwabesifazane kungakulandela emathuneni akho.
Indlela Yokugwema I-Methyltestosterone Side Side Effects
Thatha amanani aphansi we-steroid ngenkathi ukhawulela ubude bomjikelezo emavikini angaba ngu-7 ukuze ugweme ukuvimbela isibindi
Thatha i-methyltestosterone eceleni kwe-5α-reductase inhibitors efana ne-finasteride, i-dutasteride, noma ama-compounds afanayo, okuzokwenyusa imiphumela ye-dihydrotestosterone.
Uma isidakamizwa sishintsha sibe yi-DHT, siholela ezinkingeni ze-prostate nokulahlekelwa izinwele.
Sebenzisa i-aromatase inhibitors njenge-Tamoxifen, i-Nolvadex, noma i-Arimidex ukulwa nemiphumela emibi ye-estrogenic
Yeka umthamo uma uhlangabezana nemiphumela emibi
Sebenzisa i-detox ye-fover njenge-Liv-52 noma i-Liver Stabil ukuvikela isitho kusuka ekulimaleni okungenzeka
Ukuze unciphise isifo senhliziyo, setha uhlelo olusebenzayo lokuvivinya umzimba ngenkathi ugwema amafutha agcwele, ama-carbohydrate, ne-cholesterol. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukwengeza ukudla kwakho ngamafutha enhlanzi kanye ne-antioxidant.
Ngemuva kokuqedela umjikelezo, kufanele usebenzise i-PCT protocol yokukhahlela kuqala ukukhiqizwa kwe-hormone engapheliyo ye-testosterone.
Thatha amanzi amaningi ngenkathi ugwema iziphuzo ezidakayo
10. I-Methyltestosterone yokudayiswa
Njengoba ukusetshenziswa kwe-methyl test akuyona emthethweni ngokungekho emthethweni, cishe awukwazi ukuwa ngemikhiqizo yamanga. Uma unemithi egunyaziwe evela kudokotela, ukuthola i-steroid kulula njengokuthenga i-pair of sneakers. Ungakwenza noma Thenga i-Methyltestosterone powder noma ukuthenga okukhethwa kukho okulungele ukucwaninga, izinhloso zomzimba, noma izinhlelo zokwelapha.
Ezimweni lapho ungenaso isincomo sesidokotela, ukhetho olulodwa luzowela emakethe omnyama namabhishi angaphansi komhlaba. Yebo, akuwona wonke ama-fakes! Ungathengisa ezitolo ezithengisayo njengezitolo Buyaas for quality and steroids ezingabizi.
Ezitolo ze-intanethi, i-methyltestosterone edayiswayo ishibhile, inokwethenjelwa kakhulu, futhi ungakwazi ngokungafani ukuqhathanisa amanani phakathi kwabadayisi abahlukene.
11. I-Methyltestosterone Vs Testosterone ye-Bodybuilding
I-Methyltestosterone i-androgen engavamile, efana ne-testosterone engapheliyo. Nakuba okokuqala kuhlanganiswa, bobabili banezindlela ezifanayo zesenzo kuze kube sengathi umzimba awukwazi ukutshela umehluko. Ngaphandle kwe-testosterone yemvelo, kunezinye izinhlobo ezifana ne-Test Propionate noma iCypionate, esebenza ngendlela efanayo.
I-Methyltest ine-bioavailability enhle kakhulu uma kuqhathaniswa ne-testosterone ngenxa yokwengezwa kweqembu le-methyl esakhiweni salo. Kodwa-ke, bobabili ama-steroids bangaphatha ukukhulelwa kwasekupheleni kwesikhathi, ubuhlungu be-hypogonadism, ubuhlungu besifuba se-postpartum kanye ne-engorgement, umdlavuza webele, nama-testicles angenasici.
Bangabelungu lama-anabolic-androgenic steroids
Bakhulisa ukusebenza, amandla, nobunzima bomzimba emzimbeni womzimba, abadlali bezemidlalo abasebenzayo, nabasebenzi be-powerlifters
Zinezicelo zokwelapha ekunakekeleni u-hypogonadism namazinga aphansi e-testosterone
Inani ngalinye Kancane kancane uma uthenga i-methyltestosterone ngobuningi Kuncane kakhulu
Umzila wokuphatha I-oral, buccal, nokulingana Itholakala njengelesi gel kanye nesisombululo
Ukuvunyelwa ngokomthetho 1972 1953
Ukwakheka Kukhona iqembu le-methyl ku-17th isikhundla se-athomu ye-carbon Ayikho i-methyl esakhiweni sayo
I-Methyltestosterone iphakathi kwe-androgenic steroid embalwa nemiphumela emibili yokwelapha kanye nomzimba. Okungenani, lesi sidakamizwa sitholakale kalula futhi sinokwethenjelwa kusukela ezinye izifunda ziye zasemthethweni ukusetshenziswa kwazo kwizicelo zemitholampilo.
Nakuba lesi sihloko singaqiniseki ngokuphepha okuphelele uma usebenzisa i-methyl test, ikunika i-rundown kulokho okumele ulindele ngenkathi uyithatha. Ngokusekelwe kolwazi, ungakwazi ukukala izingozi bese uzilinganisela ngezinzuzo. Uma kuwufanele, khona-ke ulungile Thenga i-methyltestosterone inthanethi.
Zonke izidakamizwa zinemiphumela emibi. Ngakho-ke, imfihlo ethize yokujabulela imiphumela iwukuphatha lezi zakhiwo. Uma ufunde lesi sihloko, uzokwazi ukuqonda ama-hack ambalwa.
Ufuna ukuthenga? Ngena ngemvume nabakhiqizi be-methyltestosterone abathembekile Buyaas.
Stan, KB, Douglas, SM, Applied Pharmacology, I-endocrinology, 2011
Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Impumelelo ye-Methyl Testosterone Administration E-Plasma Viscosity kuma-Postmenopausal Women, Izihloko ezishicilelwe, Ku-intanethi, i-2002
URogerio, AL, Ukunqamuka Kwesikhashana nokuguga, I-Endocrinology Yen & Jaffe Yokukhiqiza (I-Seventh Edition), 2014
Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Imiphumela ye-17α-methyltestosterone, iMethandrostenolone, ne-Nandrolone Decanoate kwi-Rat Ratrous Cycle, I-Physiology kanye Nokuziphatha, 1997
UWilliam, uLlewellyn., Ukudla okunomsoco, Anabolics,2009
UKickman, AT, Pharmacology ye-Anabolic Steroids, I-British Journal ye-Pharmacology, I-PMC 2439524, i-Online, i-2018